एक्स्पो बिगतभन्दा उत्कृष्ट बन्दैछ – Arthik Awaj
एक्स्पो बिगतभन्दा उत्कृष्ट बन्दैछ
By आर्थिक आवाज २०७५ मंसिर १३ गते बिहीबार ०३:१६ मा प्रकाशित
सफल पोखरा एक्स्पो २०७५ का विविध विषयमा केन्द्रित रहेर आयोजक संस्था पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव अर्जुन पोखरेलसँग आर्थिक आवाजले गरेको कुराकानी :
एक्स्पोलाई कस्तो बनाउने प्रयास गर्नु भएको छ ?
महोत्सवलाई उत्कृष्ट बनाउने प्रयास गरेका छौं । आशा र विश्वास छ बिगतको महोत्सव भन्दा यस वर्षको एक्स्पो फरक र उत्कृष्ट हुनेछ । अन्य मेला महोत्सव भन्दा यो ए क्स्पो फरक र नौलो हुनुका साथै उत्कृष्ट बन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।
कसरी उत्कृष्ट बन्दैछ यो एक्स्पो ?
यो नामबाटै पनि उत्कृष्ट छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । अन्य मेला महोत्सवमा सीमित छन् भने हामी एक्स्पोमा रुपान्तरण भइसक्यौं । हामीलाई पनि रमाइलो मेलाको रुपमा सीमित भयो भनेर आरोप लाग्ने गरेको थियो । त्यसलाई चिर्नकै लागि हामीले नाम परिवर्तन गरेर एक्स्पो पोखरा बनायौं । एक्स्पोमा पोखरा जोडिएको छ । यो पोखरा आफैमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डिङ नाम हो । त्यसैले यसलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित गर्न सघाउँछ । एक्स्पोलाई हामीले नयाँपन दिन मेड इन नेपाल पेभेलियन राख्दैछौं । यसमा नेपालमा उत्पादित सामान मात्र राखेर दर्शकलाई नयाँ टेस्ट दिन खोजेका छौं । उद्योगका स्टलहरु अन्यमा विरलै मात्र देख्न सकिन्छ तर हामी एक्स्पोमा २० वटा उद्योगका स्टलहरु राख्दैछौं त्यो पनि औद्योगिक पेभेलियन बनाएर । यो आफैमा अन्य भन्दा फरक छ । होमस्टेको स्टल राख्दैछौं । जहाँबाट सम्पूर्ण होमस्टेको जानकारी लिनुका साथै केही होमस्टेको डेमो पनि प्रदर्शन गर्दैछौं । यो आफैमा नौलो र उत्कृष्ट । त्यस्तै एकै थलोबाट एडभेञ्चर स्पोर्टसहरु जस्तै बञ्जी जम्प, प्याराग्लाइडिङ, जीप फ्लायर, हट बेलुन लगायतकाको जानकारी र टिकट उपलब्ध गराउँदैछौं । यो पनि एक्स्पोमा नयाँ र फरक छ । यसैगरी मोबाइल, अटो, कृषि, हस्तकला, पुष्प, बाल उद्यानलगायतको छुट्टाछुट्टै पेभेलियन राख्दैछौं । यी सबै हिसाबले अहिलेको एक्स्पो मेलामा पुग्ने दर्शक र सम्पूर्ण पोखरेलीका लागि फरक र उत्कृष्ट लाग्नेछ भन्ने विश्वास छ ।
पहिलेको मेला भन्दा यसपटक एक्स्पो कसरी फरक रहन्छ ?
हो फरक छ । एकैपटकमा सबै परिवर्तन सम्भव हुँदैन । तर हामीले सकेसम्म परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेका छौं । पहिलो त हामीले औद्योगिक व्यापार मेलालाई एक्स्पो पोखरा बनायौं । यो हाम्रो नाम अनुसारकै काम गर्ने प्रयास अन्तर्गत गरेका हौं । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ आफैमा उद्योगी व्यवसायीको छाता संस्था हो । त्यसैले मेलामा सीमित हुनुभन्दा उत्पादित बस्तुको प्रवद्र्धन गर्ने थलो बनाउनुपर्छ भनेर यसो गरिएको हो । यसलाई हामी व्यापार गर्ने भन्दा पनि प्रवद्र्धन गर्ने, जानकारी लिने अन्तर्राष्ट्रिय टे«न्डको रुपमा ढाल्ने प्रयासमा लागेका छौं । यो त्यसैको शुरुवात हो ।
पोखरेलीलाई एक्स्पो मेरो हो भन्ने अपनत्व दिलाउन के गरिरहनु भएको छ ?
यो एक्स्पोलाई संघका पदाधिकारी वा सदस्यले मात्र मेरो हो भनेर सफल नहुने रहेछ । यो सफल हुन त सबै उद्योगी÷व्यवसायी तथा सर्वसाधारणले मेरो हो भन्नुपर्छ । अझ भनौं सम्पूर्ण पोखरेली, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सर्वसाधारणले अपनत्व लिएर सहभागिता जनाउनुपर्छ । पोखरा प्रदेशको राजधानी हो । अनि यसको प्रतिनिधित्व गर्ने जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको रुपमा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ भएकाले यसको दायरा र कार्यक्षेत्र धेरै हुन्छ । त्यसैले यसलाई सम्पूर्ण संघसंस्था, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, पोखरेली तथा सर्वसाधारण सबैले अपनत्व लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । त्यसका लागि हामीले यहीँका व्यवसायी, यहीँका उत्पादन, यहीँको बजारलाई प्राथमिकता दिएका छौं । नाम परिवर्तन पनि अपनत्व दिलाउनकै लागि गरिएको हो ।
बम्पर उपहारमा परिवर्तन गर्नु भएको हो ?
हो हामीले बम्पर उपहारमा परिवर्तन गरेका छौं । अघिल्लो साल बम्पर उपहार कार राखेका थियौं । कार राख्दा आकर्षण पनि बढेको पक्का हो । तर एकजनाले मात्र पाउँदा सर्वसाधारणले बरु धेरैले पाउने गरी उपहार राख्न सुझाव दिए अनुसार यसपटक हामीले दैनिक उपहारमा बृद्धि गरेर बम्पर उपहार पनि राखेका हौं । यसपटक बम्पर उपहारमा मोटरसाइकल वा स्कुटर मध्ये कुनै एक दिदैछौं । दैनिक रुपमा टिभी, फ्रिजलगायतका राम्रा उपहार राखेका छौं । यसले गर्दा दर्शकले दैनिक रुपमा उपहार पनि पाउने र धेरैले उपहार पाउने अवसर पनि सृजना भएको छ । यो दर्शकको सुझाव अनुसार नै गरेका हौं ।
प्रचारप्रसारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ ?
एक्स्पो सफल पार्नका लागि प्रचारप्रसारको विशेष महत्व रहन्छ । पोखराका सम्पूर्ण सञ्चार माध्यम तथा पत्रकार साथीहरुबाट पनि प्रचारप्रसारमा सहयोग मिलेको छ । हामीले व्यानर तथा ब्रोसरका माध्यमबाट पनि प्रचारप्रसार गरिरहेका छौं । छापा, अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन लगायतका सञ्चार माध्यममा पनि प्रचारात्मक सामग्री प्रकाशन तथा प्रशारण भइरहेका छन् । बिगतमा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गर्ने राष्ट्रिय औद्योगित व्यापार मेलाको परिस्कृत नाम एक्स्पो पोखरा हो भनेर चिनाउन पनि प्रचारप्रसारको महत्वपूर्ण भूमिका छ । विभिन्न सार्वजनिक सवारीमा पनि हामीले व्यानरहरु टाँसेका छौं । प्रचारप्रसारलाई सकेसम्म प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने काम भएको छ ।